afnokura.com » अन्तरवार्ता दिन जाँदै हुनुहुन्छ ? यसाे गर्नुस् जागीर पक्का गर्न
सायद पहिलो पटक ढोका ढकढक्याउँदा तपाईलाई भित्रबाट आउनुहोस् भन्ने निर्देशन आउनसक्छ । ढोका खोलेर 「失礼します」भनेर भित्र छिर्नुहोला । भित्र छिरेपछि शुरुमा अन्तरवार्ता लिन बसेको व्यक्तिसँग आइ कन्ट्याक्ट मिलाउनुहोला । अन्तरवार्ता लिन धेरैजना बसेको अवस्थामा बिच भागतिर हेर्नुहोला । तपाइँ भित्र छिरेपछि ढोका लगाउनुपर्छ । ढोका लगाउँदा सीधै ढोकातिर फर्किएर ढोका बन्द नगर्नुहोला । तपाइँ सीधै ढोकातिर फर्कंदा अन्तरवार्ता लिन बसेकाहरु तपाइँको पछाडि पर्ने हुनाले हलुका कोल्टे-कोल्टे अवस्थामा रहेर विस्तारै ढोका बन्द गर्नुहोला । अगाडितिर फर्केर पछाडि हातले मात्र ढोका बन्द गर्ने काम कदापी नगर्नुहोला । ढोकाभित्र छिरेपछि एक पटक अभिवादन गर्न नभुल्नुहोला । भित्र छिरेर ढोका बन्द गरिसकेपछि सीधा अन्तरवार्ता लिन बसेका व्यक्तिहरुसँग हेरेर फूर्तिका साथ अभिवादन गर्नुहोला । अन्तरवार्ता लिन धेरै व्यक्ति बसेका छन् भने बीचमा बसेको व्यक्तितिर हेरेर अभिवादन गर्नुभए हुन्छ । 「本日はよろしくお願い致します」भन्नुहाेस् ।
अभिवादन सकिएपछि अन्तरवार्ता लिन बसेकाहरुसँग ४५ डिग्री जतिमा निहुरिएर शिर झुकाउनुहाेस् । शिर शिर झुकाउँदा करीव एक सेकेण्ड जति रोकिनुहोला । अभिवादन गरेर शिर झुकाएपछि तपाइँकाे लागि तयार गरेर राखिएकाे कुर्सिको छेउमा उभिनुहोला । तपाइँको लागि त्यहाँ कुर्सिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सीधै कुर्सिमा नबस्नुहोस् । कुर्सिको आडमा उभिएर आफ्नो नाम र कलेजको नाम भन्नुहोला । नाम भनिसकेपछि फेरि ४५ डिग्रीमा शिर झुकाएर एक सेकेण्ड जति रोकिनुहोला । यति भैसकेपछि पनि अन्तरवार्ता लिन बसेकाहरुले तपाइँलाई बस्ने अनुुमति नदिएसम्म कुर्सीमा नबस्नुहोला । विशेषत आफूभन्दा ठूलाले अनुमति दिएपछि मात्रै कुर्सीमा बस्ने गरिन्छ । तर अन्तरवार्ता लिन बसेकाहरुबाट अनुमति पर्खिएर कुर्सीको आडमा उभिरहनुहोला । अनुमति प्राप्त भएपछि कुर्सीमा बस्नुहोला । तर बस्ने बेलामा पनि धेरै कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । बस्ने अनुमति प्राप्त भएपछि 「失礼します」भनेर १५ डिग्री जति शिर झुकाएर अभिवादन गरेर बस्नुहोला । कुर्सीमा बस्ने बेलामा पनि कुर्सीमा चनाखो भएजस्तो गरेर बस्नुपर्दछ । तपाइँको ढाड कुर्सीमा नजोडिएको अवस्थामा हुनुपर्छ । पुरुषले दुवै हात हल्का मुठी पारेको जस्तो गरी दुवै घुुँडाको माथि राख्नुहोला । महिलाहरुले खुट्टा जोडेर बसेपछि दुवै हातलाई हल्का खप्ट्याएको जस्तो गरी घुँडामाथि राख्नुपर्दछ ।
-अन्तरवार्ता दिन जाँदा झोला कहाँ राख्ने ?
बस्ने अनुमति प्राप्त भएपछि तपाइँ बस्नुहुन्छ । तपाइँले बोक्नुभएको झोला राख्ने ठाउँ भनेको तपाइँलाई बस्न दिइएको कुर्सी र त्यो कुर्सीको वरिपरि तपाइँको ठाउँ हो । कुर्सीको आडमा ठाडो पारेर राख्न सक्नुहुनेछ । झोला राख्दा सुताएर नराख्नुहोला । तपाइँले लगाएर जानुभएको कोट अन्तरवार्ताको लागि कोठामा छिर्नुभन्दा अगाडि नै राम्ररी पट्याएर बोक्नुहोस् । राख्ने ठाउँ कि त आडैमा अर्को कुर्सी खाली छ भने अथवा तपाइँकै सामानको माथि राख्न सक्नुहुनेछ । तर आडैमा भएको अर्को कुर्सी माथि राख्नको लागि तपाइँले अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । 「こちらに置いてもよろしいでしょうか？」भनेर सोध्नुहोला । अनुमति पाउनुभएन अथवा आडैमा अर्को कुर्सी छैन भने राम्ररी तपाइँको सामानमाथि राख्नुहोला । अन्तरवार्ता दिन जाँदा कहिले काहीं अन्तरवार्ता लिने व्यक्ति ढिला आउन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । विविध कारणवश तपाइँभन्दा अन्तरवार्ता लिने व्यक्ति पछि आएर कोठामा छिरेको अवस्थामा उक्त व्यक्ति कोठामा छिर्नासाथ उठेर तपाइँले अभिवादन गर्नुहोला 「本日はよろしくお願い致します」अन्तरवार्ता लिने व्यक्ति कोठामा छिर्दा पनि तपाइँ उठ्नुभएन भने अति नै असभ्य हुनजान्छ । यसलाई कसैगरी नविर्सनुहोला ।
-अन्तरवार्ता सकिएपछि के गर्ने ?
अन्तरवार्ता सकिएपछि अन्तरवार्ता लिने व्यक्तिले 「本日の面接は以上です。お疲れ様でした」 भनेपछि तपाइँले फर्कने मोड बनाउनुपर्छ । अन्तरवार्ता लिने व्यक्तिले अन्तरवार्ता सकिएको जनाउ दिइनसकुन्जेल तपाइँ नउठ्नुहोला । अन्तरवार्ता सकिएको जनाउ दिइसकेपछि बसेकै अवस्थामा एकपटक शिर निहुराएर सम्मान गर्नुहोस् । 「本日はお忙しい中、貴重なお時間を割いていただき、誠にありがとうございました」भनेर चर्को र फूर्तिलो स्वारमा अभिवादन गर्नुहोला । फेरि एक पटक शिर निहुराएर अभिवादन गर्नुहोला । त्यसपछि उठेर कुर्सीको आडमा उभिनुहोला अनि फेरि एकपटक शिर निहुराएर 「失礼します」भनेर अभिवादन गर्नुहोला ।
एकैपटक अभिवादनको शब्द बोल्दै र शिर निहुराउँदै नगर्नुहोला । अभिवादन सकिएपछि सरासर ढोकासम्म जानुहोला । ढोकाको अगाडि पनि अन्तिमपटक एक पटक फेरि अभिवादन गर्नुहोला । त्यसपछि विस्तारै ढोका खोल्नुहोला । बाहिर निस्किएपछि तपाइँले ढोका बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । ढोका लगाउनु भन्दा अगाडि एकपटक अन्तरवार्ता लिन बसेका व्यक्तिहरुसँग आइ कन्ट्याक्ट राख्नुहोला । ढोकाबाट बाहिरिने क्रममा पनि अन्तरवार्ता लिन बसेकाहरुतिर सिधै ढाड नफर्कने गरी कोल्टे-कोल्टे पर्दै विस्तारै ढोका लगाउनुहोला । यदि यतिकुराहरु तपाइँले सँधै सम्झनुभयो भने तपाइँ जागीरको लागि अन्तरवार्ता जाँदा तपाइँको मूल्यांकन उच्च रहनेछ ।***